Qaad Laga Keenay Itoobiya Oo Shalay La Geeyay Boosaaso | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Qaad Laga Keenay Itoobiya Oo Shalay La Geeyay Boosaaso
Boosaaso: (Hubaal) Iyadoo dawlada Soomaaliya ay ka joojisay qaadkii laga keeni jiray Kenya Soomaaliya in la geeyo ayaa shalay qaad laga keenay Itoobiya waxaa la geeyay magaalada Bossaaso. In badan oo ah dhulka Soomaaliya ee koofurta iyo badhtamaha ayaan laga qayilin shalay oo dhan maadaama aanan qaad la geyn. Si kastaba, shalay qaadkaa laga keenay Itoobiya ee Bossaaso la geeyay ayaa fursad u siiyay dad badan inay qayilaada sii wadaan oo aanay ka kala go’in.
Si kastaba ha ahaatee kuma aanu filnayn, qaadkaasi la geeyay, haddana Dad badan ayaa u riyaaqay joojinta qaadkii Kenya ka iman jiray aiagoo sheegay inuu dhibaato badan oo dhaqaale ku hayay dalka iyo dadka.
Dhanka kale, dawlada Soomaaliya ayaa sheegtay in mamnuucida ay ku soo rogtay qaadkii Kenya Soomaaliya uga iman jiray guddoomiyaha degmada Meru ee dalka Kenya uu sabab u ahaa.
Dawlada Soomaaliya ayaa sheegtay in badhasaabka gobolka Meru, Peter Munya uu u adeegsanayo qaadka in uu ugu ololeeyo kala qeybsamida Soomaaliya.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Nairobi Kenya ayaa sheegay booqasho bishii hore uu Mr. Munya ku tagay Hargeysa in uu dawlada Soomaaliya ku qasabay inay Soomaaliya ka joojiyaan qaadka. “Tani waxay ku keentay cadaadis aan loo adkeysan karin dawlada. Waxaanu soo afjarnay ganacsiga qaadka si arimahaan wax looga qabto,” sidaa ayuu yidhi safiirka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xassan.
Isniintii dorraad ayaa dawlada Soomaaliya ku dhawaaqday in ay joojisay diyaaradihii qaadka ka keeni jiray Kenya ilaa amar dambe.